Knowledge Archives - MM9
ထောင်ချောက်ဆင်ခံရပြီး ဗျောက်အိုးထည့်ထားတဲ့ နာနတ်သီးကို စားမိလို့ မချိမဆံသေပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီးတဲ့ ဆင်မကြီး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ ကီရာလာပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ Silent Valley National Park က ဆင်ရိုင်း တစ်ကောင် ဟာ အနီးအနားက ရွာ ကို အစာရှာ လာစဉ် ဗျောက်အိုး ထည့် ထောင်ချောက် […]
နှစ်ပေါင်း (၁၄၈) နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နယူးကာဆယ်မှာရှိတဲ့ နှစ်ပေါင်း 148 နှစ် ချက် ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီး source မူရင်း
စိတ်ကြီးစိတ်ကောင်း ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ ရွှေရောင်အိမ်ကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသူ အမျိုးသမီးလေး
စိတ်ရဲ့ စွမ်းအားက သိပ်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ ဟိုရက်က မလင်းဇာနည်ဇော်က fbမှာ “မမေသဉ္ဇာဦး အိမ်တက်ပွဲ အိမ်ကြီးက လှလိုက်တာ ခမ်းနားလိုက်တာ” ဆိုတာတွေ တင်ထားတော့ စိတ်ထဲမှာ “ဟင် မဇာကြီးက ငါတို့လည်း မဖိတ်ဘူး ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး […]
ဘုရားရှိပြီး အိပ်စက်သူတိုင်း ရရှိလာနိုင်မည့် ကုသိုလ်ထူး အကျိုး (၁၇) ပါး
ဘုရားရှိခိုးရသော အကျိုး(၁၇)ပါး ၁။ သူတစ်ပါးတို့ ရှိခိုးခံထိုက်ခြင်း။ ၂။ စိတ်၏ ရဲရင့်တည်ကြည်ခြင်း။ ၃။ သေသည်၏အခြားမဲ့၌သုဂတိဘ၀ကိုရခြင်း။ ၄။ နောင်ဘုရားနှင့်တွေ သည့်အခါသစ္စာလေးပါးကိုသိလွယ်ခြင်း။ ၅။ အမျိုးမြတ်ခြင်း။ ၆။ သူတစ်ပါးတို့၏အရိုိအသေအပြုကိုခံရခြင်း။ ၇။ ချီးမွမ်းထိုက်သောကိုိယ်အဂါင်္နှင့်ပြည့်စုံခြင်း။ ၈။ […]
မြန်မာတို့၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရတနာများကို လေးလေးစားစား ပြုစုထိန်းသိမ်းထားသော ဂျာမနီနိုင်ငံ ……။
ဂျာမနီနိုင်ငံ ပြတိုက်ထဲက မြန်မာတို့၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရတနာများအား တွေ့ရစဉ် ….။ ခရက်ဒစ် မူရင်း
တစ်နှစ်ကို မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်း ၁သောင်းခွဲလောက် ငွေရှာပေးတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အကြီးဆုံးနွားထီးကြီး …..။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စူလတန်လို့အမည်ရပြီး ညတိုင်း ဝီစကီတစ်ပုလင်း သောက်တဲ့ အကြီးဆုံးနွားတစ်ကောင်တစ်နှစ်ကို မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်း ၁သောင်းခွဲလောက် ငွေရှာပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ပြီးဒီနွားကြီးဟာ ဟာအလေးချိန် တစ်တန်ခွဲကျော်ရှိပြီး ပေါင် ၂.၅ သန်း (မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်း ၄သောင်းကျော်) တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ […]
ရှူတင်သွားဖို့တောင် လမ်းစရိတ်မရှိခဲ့တဲ့ မင်းသားပေါက်စ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ အတုယူစရာ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း …..။
အဆိုတော် ၊ မင်းသားကြီး ဦးကျော်ဟိန်း ဆိုရင် မသိသူမရှိလောက်အောင် သူ့ခေတ်သူအခါရယ်တောင် သျှမ်းသျှမ်းတောက် အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာမျိုးရိုးမရှိပဲ သရုပ်ဆောင် သင်တန်းလေး တက်ကာ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။အတန်းပညာကို (၉)တန်းထိသာ သင်ယူခဲ့ပြီး ကျောင်းစာမှာ ဆက်လက်လေ့လာဖို့ စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့သလို […]
ကိုယ့် အိမ်ထောင်ရှိလျက် ဖောက်ပြန်တာ တဏှာကြီးပြီး ဉာဏ်ရည် နိမ့်လို့ ပါ …..။
ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရှိလျက်နဲ့ ဖောက်ပြန်ကြတဲ့သူတွေက တဏှာကြီးသူတွေ၊ လိင်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့မတင်းတိမ်နိုင်သူတွေပါ။သူတို့ရဲ့တဏှာစိတ်ကြောင့် မိသားစုအပေါ်ရက်ရက်စက်စက် ပြုရက်တာ။သိက္ခာမရှိ သမာဓိမရှိ ကိုယ်ကျင့်တရားမထိန်းနိုင်ပဲ ဖောက်ပြန်တာပါ။အဲဒီလို ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေက တဏှာကြီးမှာ ချစ်ခြင်း မပါဝင်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇစ်ခ်ရူဘင်ရဲ့ သုတေနမှာ အချစ်နဲ့ တဏှာဟာ မတူညီမှု […]
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန် ကွယ်လွန်ခြင်း (ရုပ်/သံ) ……။
လူမြင်ကွင်း မှပျောက်နေတဲ့ ကင်မ်ဂျုံအန် ကွယ်လွန် သွားပြီလား? ဘယ်နေရာ ရောက်နေလဲ? ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေမှာ မတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက် ခန့်မှန်းမှုတွေ ပိုမိုမြင့် တက်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်ကို နောက်ထပ် အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားတစ်ခုမှာ […]
ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ မင်းသားကြီး jacky chan …..။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ!! ကျွန်တော့်ရဲ့ jacky chan က ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဘေးအန္တရာယ် နဲ့ အရမ်းစိုးရိမ်မိပါတယ်… virus corona / covid-19 ထို့ကြောင့် နိုင်ငံအားလုံးအတွက် ဒီဘေးအန္တရာယ် ကို $ […]